Nahoana isika no milalao lalao? Mazava ny valiny - ho an'ny fialamboly, endrika fialamboly rahateo. Mba hahatonga ity fialam-boly ity hahafinaritra kokoa, matetika ny mpamorona dia manary atody Paska sy bokotra hafa. Ary noho izany dia manangona azy ireo tsirairay isika, mihalalina hatrany hatrany ... Mandra-pahatongantsika any amin'ny lavaka tsy hita noanoa izay andrasan'ny bitro paska ho antsika, mangoraka.
Fantatro fa ny fanoratana momba ny atody Paska mandritra ny Paka, izay "atody Paska" ara-bakiteny, dia tsy hevitra tsy mahazatra na manavao. Na izany aza, sarotra ho ahy ny mitazona izany toe-javatra izany, satria fantatro fa na ny atody Paska aza dia manampy amin'ny fahafinaretana elektronika fotsiny, singa iray lehibe amin'ny kolontsain'ny mpilalao izy ireo (na dia voasivana amin'ny vazivazy an-tserasera aza matetika)
Heveriko fa ny ankamaroan'ny olona dia mampifangaro ny trangan'ny atody Paska - miafina bebe kokoa amin'ny atiny lalao izay miresaka momba ny sanganasa kolontsaina hafa, na zavatra tsotra tsy dia mahazatra loatra amin'ny famokarana nomena iray, nampiana mazava hoe "an-kery" na ho an'ny vazivazy. Angamba tsy ny olon-drehetra no mahalala hoe firy taona izao fisehoan-javatra izao, ary efa mihoatra ny 40 taona izao.
Ity Andriamatoa Warren Robinett, taona vitsivitsy lasa izay. Misaotra betsaka nanova ny tantaran'ny lalao! (sary: ​​GDC ofisialy ,, CC BY-SA 2.0)
Manomboka amin'ny prehistory ka hatramin'ny CJ
Ny razamben'ny atody rehetra (ary tsy miresaka momba ny pterodactyl lehibe eto isika) dia heverina ho ny lalao "Adventure", izay tamin'ny volana Jolay 1980 dia tonga tao amin'ny Atari 2600, ary io fitaovana io dia miharihary mazava kokoa fa efa antitra, satria avy ny taona 70. zavatra amin'ny fomban'ny Mesozoic - ny andro taloha, raha ny ankamaroan'ny lohateny dia vondron'olona mpankafy tao amin'ny lakaly sy garazy, lavitra ny famokarana ankehitriny no natambatra nitombo habe mahatalanjona.
Ary tamin'izany andro taloha be izany, ny iray amin'ireo mpandahatra fandaharana, nahatsapa fa ny lehiben'ny Atari dia nandidy ny anaran'ny mpamorona azy ho diso amin'ny lalao (matahotra ny hividy azy ireo amin'ny fifaninanana izy ireo), dia nanapa-kevitra ny hanaikitra ny bit ary namorona efitrano miafina tsy misy afa-tsy amin'ny toe-javatra sasany, izay nisy ny teny hoe "Noforonin'i Warren Robinett". Io dia toy ny fiandohan'ny taonan'ny atody.
Sarotra ny manisy lisitra ny atiny miafina rehetra toy izany amin'ny lalao rehetra mifanesy, fa amin'ny zavatra niainako manokana dia manana ohatra mahafinaritra aho marihina. Ary satria tiako ny tsy misy dikany, ny mifanohitra amin'izay ary ny fandavana, tsy afaka ny tsy hanonona tetezana iray any San Andreas aho.
Amin'ity lalao ity, natolotra araka ny hevitro izao tontolo izao - tamin'ny fotoan'androny - tranga goavambe sy mamakivaky fanjakana foronina izay namboarina tany California dia traikefa nahafinaritra nandritra ny ora maro. Rehefa nandeha anefa ny fotoana dia nitombo hatrany ny flip mba hidirana amin'ny toerana hafahafa isan-karazany. Ary noho izany, akaikin'ny tanànan'i San Fierro, misy ny Tetezana Gant, modely amin'ilay vavahady volamena malaza.
Ny "top kombatatorika" ihany no ahazoana ireo teboka voalohany - na mitsambikina avy amin'ny fiaramanidina amin'ny parachute isika na mampiasa jetpack (mazava ho azy fa misy kaody ROCKETMAN malaza). Rehefa mahomby isika dia misy soratra eo amin'ny ilan'ny rindrina manao hoe "Tsy misy atody Paska eto. Andehana mandeha". Misaotra an'i Rockstar, mendrika izany. Hanao pikantsary farafaharatsiny aho.
Ao amin'ny GTA: SA, nitazona ny foko ihany koa ny fizakan-tena momba ny rockstar, satria tao amin'ny iray amin'ireo magazay anaty lalao no ahitanao tarehimarika (indrisy fa tsy mividy) sary miresaka lalao hafa an'ity mpamokatra ity, izany hoe Manhunt (saingy nampiady hevitra izy) ary Vice City. Indrindra indrindra fa i Tommy Vercetti maro loko dia nahagaga.
Andriamatoa Głuchowski, mbola miandry Metro hafa avy aminao aho (sary: ​​Sary-maimaim-poana, Lisansa pixel).
Ny fiainana dia toy ny baoritra atody - sanatria… Sanatria!
Fanovozan-kevitra kely hafa, nefa mahaliana ihany koa ny fanontana malalako ny boky "Metro 2033" ary - izany no izy - ireo boky amin'ny lalao. Nisy boky niparitaka nanerana ny toerana maro, miresaka ny sanganasan'i Dmitry Głuchowski miaraka amin'ny fonony. Ao amin'ny tohiny, Metro: Last Light, nisy tsiro tsy manam-paharoa niaraka tamin'ilay boky mbola tsy navoaka "Metro 2035". Na dia tena azo inoana aza ny fizaram-bola manaraka, ny famirapiratan'ny mpamaky dia zavatra iray izay vao mainka nampirehitra ny fisokafana.
Indraindray ny atiny fanampiny (tena) fanampiny dia misy dikany lalina, indraindray dia "avy any ambony" tanteraka no anaovana azy, vao miditra tsara ny kaody ara-kolotsaina Fantatro fa namotipotika ny fanontaniana momba ny Gothic tao anaty tononkirako hatrany hatrany aho, saingy tsy vitako ny tsy mihetsika - ary koa amin'ny tranga atody paska (ary tsy refesi-mandidy izy ireo) dia tsy manan-javatra hatolotra ity lalao ity.
Ao amin'ny tapany faharoa amin'ilay andiany, miverina any amin'ilay faritra niainanay ilay maherifontsika taloha isika - saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nopotehin'ny adin'olombelona sy ork mihitsy ny Lohasahan'i Mining. Saingy, ny ampahan'ny sarintany dia sarin'ny palisade orc, ao aorian'izay dia tsy maintsy misy andiana orcs - hen, any amin'ny faravodilanitra.
Ka inona izany - ny mpilalao manaja tena dia tsy maintsy manamarina izany, na dia amin'ny fampiasana kaody aza. Mazava ho azy, tsy misy na inona na inona ao ambadiky ny palisade ary fomba iray fotsiny hanamorana ny asan'ny mpamorona. Na izany aza, azonao atao ny mahita naoty avy amin'ny Mighty Alien Dwarf (io no dikantenin'ny vondrom-piarahamonina hoe "The dwarf alien mahery"). Zavaboary mifono mistery no nanoratra fa natao balaonina isika ary tsy misy na inona na inona eto, dia ny faran'ny tontolon'ny lalao izany. Nanampy izy fa tsy tokony hatoky izay nolazaina tamintsika isika ary tokony hihiratra hatrany ny masontsika.
Mahafinaritra! Misy ihany koa ny fizahana kely amin'ny Gothic 3 - any, naoty hafa iray avy amin'ny TMAD dia hita ao amin'ny efitrano iray tsy azo idirana, izay tsy azo idirana raha tsy amin'ny alàlan'ny kaody. "Tsy maty aho ary mijery anao," hoy ny nosoratan'ilay dwarf indray. Tsiro amin'ny ampahany roa amin'ny lalao.
Hiantso azy ho pacifist mahafinaritra ve ianao, sa mpanao heloka bevava nokleary? (CC BY-SA 2.0)
Ilay mpampandry tany mampidi-doza indrindra eto an-tanàna (Delhi)
Ohatra iray hafa mahaliana dia ny lesoka nanjary kanonika - na dia tsy azontsika antoka aza hoe aiza no hiafaràn'ny zava-misy ary aiza no manomboka ny angano amin'ity tranga ity. Ny tranga dia - tao amin'ny sivilizasiôna Sid Meier voalohany, niseho ho mpitarika ny sivilizasiôna hindoa i Gandhi.
Ho an'ity "ampahany" ity, ny coefficient an'ny herisetra sy ny fironana hampiasa kilalao toy ny fitaovam-piadiana niokleary dia napetraka amin'ny ambaratonga ambany indrindra. Amin'ny fotoana iray amin'ny lalao (rehefa mandroso mankany amin'ny demokrasia ny karana) dia midina hatrany io taha io, eo ambanin'ny 0, izay mety hahatonga ny lalao ho lasa adala ary hanao an'i Gandhi ho mpilalao hoditra henjana indrindra eto an-tany ary hampidina ny gnome atomika ao amin'ny fotoana voalohany.
Mampihomehy indrindra ity tantara ity satria satria i Gandhi dia mpampandry tena tokoa. Noraisin'ny mpilalao ary nataony toy izany sangisangy mihomehy, ny meme mandrakizay. Tamin'ny sivilizasiona taty aoriana, na izany aza, nametraka maodely toy izany ho toy ny vazivazy ireo mpamorona. Ny tiana hambara kosa dia ny tamin'ny farany Meier mihitsy no nilaza fa ny "Gandhi nokleary" dia angano kokoa noho ny bibikely (Hindoa) tena izy.
Misy ny lalao sy atody paska ara-bakiteny. Ao amin'ny Vice City, azontsika atao ny mamakivaky volo iray amin'ny varavarankely ary mahita efitrano iray izay ahitantsika atody goavambe misy soratra hoe "Happy Easter". Ao amin'ny Worms 4 - tsy haiko ny fizarana hafa amin'ilay andiany - raha mitifitra zavatra sasany amin'ny sarintany isika, dia nisy fipoahana ary nahazo hafatra izahay fa nahita atody paska sy valisoa tamin'ny endrika 1000 izahay. farantsakely izay azontsika ampiasaina amin'ny fivarotana kankana tafiditra ao amin'ny lalao. Zava-dehibe izany satria manintona kokoa ny lalao - afaka manokatra fitaovam-piadiana vaovao mora foana isika amin'izany fomba izany.
Ary ny tena zava-dehibe - ny atody Paska voalohany dia azo tamin'ny fitifirana fiara mitovy amin'ny DeLorean avy amin'ny "Back to the Future". Rehefa mipoaka izy dia nateraka ny sary mihetsika fampandehanana ilay fiara, ary tsy nametraka fisalasalana momba ireo andinin-tsarimihetsika. Tsy holazaiko ny zava-misy fa mijoro amin'ny asan'ny vondrona Monty Python (grenady tanana masina - ah!) I Worms.
Ilay lehilahy mahery indrindra - Naizdup amin'ny kinova finday (sary: ​​Artur Andrzej, CC BY-SA 3.0)
Atody tena izy
Indraindray ireo mpamorona lalao dia mahita fahasahiana miresaka ireo asa ivelan'ny studio-dry zareo, izay mazàna manao izany ho fahatsiarovana ankafizina kokoa noho ny solila eo amin'ny orona. Ao amin'ny The Witcher 2, afaka tafintohina amin'ny fatin'ny olona tsy fantatra anarana miampatra toy ny kitay hazo eo akaikin'ny vatan-kazo isika. Ny akanjony fotsy misy fehiloha manana ny maha-izy azy dia tsy isalasalana fa miresaka momba ny "fantsom-pinoana" tsy nahomby izay azontsika atao amin'ny lafiny rehetra amin'ny andian-dahatsoratra Assassin's Creed isika (torohevitra mihitsy aza). I Geralt dia tsy mijery afa-tsy ilay mahantra nopotsehina tamin'ny tany ary nimonomonona tamin'ny tenany hoe "tsy hianatra mihitsy" izy ireo.
Etsy andanin'izany, ny Witcher koa dia nanamboatra fanamarihana mahaliana momba ny zava-misy Poloney - ao amin'ilay "iray" Naizdup voalaza - lehilahy matanjaka izay manao ny zavatra rehetra ambony ambany (eny, vakio ny anarany aoriana), ny sasany amin'ireo NPC dia hiteny hoe "Aiza no ny lalàna sy ny fahamarinana "(Eny - tadidinao fa iza no tompon'andraikitra tamin'ny famoronana ny lalao). "Matoria, ry dadabe!" Hiseho ihany koa izy indraindray, ary ao Vizima ny mpitarika ny jiolahimboto ao an-toerana dia i Mutton (Tadidinao izany mafioso izany?).
Betsaka ny karazana atody Paska sy lalao, ary tsy misy dikany ny lisitra azy ireo tsirairay. Tsara anefa ny manamarika fa tamin'ny andrana tsy nahy nilalao ny oron'ny lehibeny dia nanjary singa manan-danja amin'ny kolotsaina filalaovana izy ireo, ary miandry ny mpandray anaram-boninahitra vaovao aza, izay tamin'ny fotoana nisian'ny première nomena lalao dia mihazakazaka amin'ny tatitra momba ny harena miafina sy ny andinin-tsoratra masina.
Ka raha manana fotoana fialan-tsasatra amin'ny Paska amin'ity taona ity ianao dia alefaso ny lalao tianao indrindra ary ezaha hitady zavatra tsy hitanao teo aloha. Na hey - manaova fihazana atody Paska tena, sekoly taloha. Rehefa dinihina tokoa, teo no nanombohana, sa tsy izany?
Manana atody matsiro!